‘पोस्ट कोभिड’को निदान र तेस्रो लहरको रोकथाम कसरी ? – Sajha Achham
२०७८ मंसिर २२ बुधबार ०४ बजे १० मिनेट
‘पोस्ट कोभिड’को निदान र तेस्रो लहरको रोकथाम कसरी ?
sajhaachham२०७८ असार १५
काठमाण्डाै – कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले यसको रोकथामका लागि आवश्यक तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै आवश्यकताअनुसार अस्पतालमा बेड र अक्सिजन थप गरिएको तथा सीमा नाकाहरुमा परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यसको लागि सबै सचेत र जिम्मेवार हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर कायमै रहेको र तेस्रो लहरको पनि जोखिम रहेकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डमा ध्यान दिन उहाँको सल्लाह छ । यस्तै कोरोना भइसकेपछि पनि गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या भएकालाई सरकारी अस्पतालमा जाँच गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
कोरोनापछि शरीरका कुनै अङ्गमा असर परेको भए सरकारी अस्पतालका सम्बन्धित विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारी अस्पतालमा रहेका सामाजिक सेवा इकाईले पोस्ट कोभिडको उपचारमा आवश्यकताअनुसार छुटको व्यवस्था गर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले पोस्ट कोभिड अर्थात कोभिडपछिको स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल जानेहरु बढेका छन् । कोभिडपछिको स्वास्थ्य समस्या दुई, तीन महिनासम्म पनि देखिने गरेको छ ।